Man United Oo Ka Faa'ideysaneysa Burburka Barcelona & Afar Xiddig Oo Ay Kala Soo Wareegayaan Xagaagan - Gool24.Net
Man United Oo Ka Faa’ideysaneysa Burburka Barcelona & Afar Xiddig Oo Ay Kala Soo Wareegayaan Xagaagan
August 18, 2020 Abdirahman Camir
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso in ay si buuxda uga faa’iideysato xaalada cakiran ee kooxda Barcelona waxayna dooneysaa in Afar ciyaaryahan kala soo wareegaan kooxda reer Catalan xagaagan.
Muusabadii 8-2 ee Barcelona ka soo gaadhay Bayern Munich isbuucii hore ayaa dhalisay shaki weyn oo la xiriira in kooxda ay bilaabi doonto is bedelo cajiib ah laga bilaabo madaxweynaha Josep Maria Bartomeu ilaa kabtanka kooxda Lionel Messi.
Is bedelka ugu horeeyay ee Barcelona sameysay ayaa ahaa kadib markii Tababare Quique Setien shaqada laga ceyriyay ka dib 25 kulan oo uu macalinkan maamulaayay kooxda, waxaana loo badinaayaa in lagu bedeli doono Ronald Koeman sidoo kale kooxda Barcelona ayaa sameyd doonta mushahar dhimis.
Wargeyska reer Spain ee Mundo Deportivo ayaa laga soo xigtay in United ay noqon doonta kooxda ugu horeysa ee ka faaideysato isbedelada Kooxda Reer Spain waxayna doonayaan Ousmane Dembele, Arturo Vidal, Ivan Rakitic iyo Samuel Umtiti.
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in kooxda United ay durbaba wax ka weydiisay Barcelona ciyaartoyda Umtiti iyo Dembele, iyagoo u arka xiddiga Faransiiska bedelka macquulka ah ee bartilmaameedka koowaad ee Jadon Sancho.
Ugu dambeyntii Afartan Ciyaaryahan ayaa dhamaantood lafilayaa in suuqa la soo dhiigo xagaagan, dhamaantooda waxay ku habboonaan doonaan macalinka Ole Gunnar Solskjaer oo doonaya inuu keeno ciyaaryahano daafac dhexe, qadka dhexe iyo garabka ka ciyaara.